पाँच लाख ठग्ने गिरी जेल चलान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले रु चार लाख ८५ हजार ठगेर फरार रहेका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरी जेल चलान गरेको छ ।
ब्यूरोको टोलीले वैदेशिक रोजगारी न्यायाधीकरणको मिति २०७० को फैसलाअनुसार एक वर्ष ६ महिना कैद र रु एक लाख ५० हजार जरिवाना सजाय तोकिएका महोत्तरीका ३१ वर्षीय आरती गिरीलाई आज कमलपोखरीबाट पक्राउ गरिएको हो । गिरीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएकामा अदालतको आदेशअनुसार कैद भुक्तानका लागि कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौँ पठाइएको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ १७:४१
जेष्ठ ६, २०७५ नारायण ढुंगाना/रासस
रत्ननगर, चितवन — हात्तीसारका माहुत विनोद चौधरीले त्रित... सिटी बजाए । लक्ष्मण थुचुक्क बस्यो । अर्को सिटीमा सुत्यो, अर्को सिटीमा कोल्टे पर्‍यो । चौथो सिटीमा पेट उचालेर घुँडा टेकेर बस्यो । यसरी बस्दा हौदा कस्न सजिलो हुन्छ ।
ओई ! लक्ष्मण यता आइज । पर भएको लक्ष्मण खुरुखुरु आयो । अडी ! टक्क अडियो । पछाडि जा ! पछाडी फर्कियो । जा.. माला लगाई दे भन्दा माला टपक्क टिपेर मान्छेको गलामा पहिर्‍याइदिन पुग्छ । टाउकोमा सुँड राखेर आशीर्वाद दिन्छ ।
हात्तीले माला पहिर्‍याइदिएको नौलो मानेका भरतपुरका दिदीभाइ आरती र विजय सापकोटा त्यो देखेर औधी रमाए । उनीहरुले पनि हात्तीबाट माला पहिरिएर आशिर्वाद लिए । “नौलो अनि रमाइलो लाग्यो,” आरतीले भने ।
चितवनको सौराहास्थित राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा रहेको १० वर्षको लक्ष्मणगज हात्ती अहिले आफैं माला लगाइदिन्छ । मानिसलाई आशीर्वाद दिन्छ । टाउको निहुर्‍याएर ढोग्छ । अनि, पछाडि र अगाडिको खुट्टा उठाएर दुई खुट्टामा उभिन्छ । बडेमानको ज्यान अड्याएर सानो काठको बेन्चमा उभिन्छ । कुनै एउटा वस्तुको गन्ध सुँधाएर त्यसलाई थाहा नपाउने गरी अन्तै राखिदियो भने गन्ध सुँघ्दै खोजेर ल्याउँछ पनि । यसरी नमूना कला प्रदर्शन गर्दै आएको छ लक्ष्मण ।
“चारवटा खुट्टा भएको जनावर दुई खुट्टामा बस्न सक्छ कि सक्तैन भनेर हेरियो त्यो पनि सक्यो,” माहुत चौधरीले भने ।
दायाँबायाँ जा भन्दा जाने, बस भन्दा बस्ने । उभी भन्दा उभिने गर्छ । “यसले नेपाली भाषा चाहीँ प्रष्ट बुझ्छ,” चौधरीले थपे– “यहाँको थारु भाषा पनि बुझ्छ ।” उनका अनुसार यसरी नेपाली भाषा बुझ्ने हात्ती नेपाल मै पहिलो हो । सामान्यतः नेपालमा पालिएका अन्य हात्ती यस्तो गर्दैन ।
यसरी अतिरिक्त कला देखाउने हात्ती पनि नेपालमा पहिलो हो । “फरक कला देखाएको छ लक्ष्मणले,” निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत अभिनय पाठक भन्छन् ।
अघिल्लो वर्ष थाइल्याण्डको सर्कसमा पुग्दा हात्तीले विविध कला देखाएको देखिएको थियो । डोरीमा टेकेर हात्ती हिँडेको दृश्य रोमाञ्चक थियो । क्याटवाक पनि राम्रै गरेको थियो । तर त्यति धेरै कला नजाने पनि सौराहाका लक्ष्मणले देखाएको कला आफैंमा नेपालका लागि नौलो छ । सिकाए हात्तीले गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण लक्ष्मण हो भन्नुहुन्छ हात्तीका एकजना माहुत कमल परियार ।
देवीकलीले २०६५ साल कात्तिक १ गते राम र लक्ष्मण जुम्ल्याहा पाएकी थिइन् । आमासँगै राम चाहीँ निकुञ्जको मुख्य कार्यालय कसरामा छ । लक्ष्मण भने सौराहाको हात्तीसारमा छ । एकपटक सिकिस्त बिरामी परेको थियो लक्ष्मण । मर्‍यो भनेर बाँचेकाले आरामका लागि यसलाई सौराहा ल्याइएको थियो ।
अहिले सौराहामा कला देखाउन थाले पनि हेर्ने पर्यटकको भीड नै हुन्छ । पर्यटकहरु सेल्फी लिन्छन् । तस्वीर लिनेदेखि प्रदर्शन गरेको कलाको भिडियो खिचेर रमाउँछन् ।
पहिले पिटाइ दिएर हात्तीलाई सिकाइन्थ्यो । विदेशी वन्यजन्तु विज्ञ आएर पिटाइ भन्दा मिठाइले धेरै कुरा सिक्छ भनेर चितवन निकुञ्जमा जन्मिएका धेरै हात्तीलाई सिकाइयो ।
मिठाइबाट सिकाएको हात्तीले सजिलै सिक्यो पनि । त्यही देखेर विनोद चौधरीले हात्तीले के सम्म गर्न सक्छ भनेर आफ्नै सुरमा सिकाउन थालेका थिए । भनेको मान्दा केरालगायत विभिन्न खानेकुरा दिइन्छ । त्यसरी सिकाउँदै नभन्दै धेरै कुरा गर्न सक्ने भएको छ लक्ष्मण ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्याल भन्छन्, “कर्मचारीहरुले आन्तरिक रुपमा के सम्म गर्दोरहेछ भनेर सिकाएका रहेछन्, माला लगाउने, आर्शिवाद दिने गरिरहेको छ ।”
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ १७:२५